Uyitywina njani intswela-ngqesho kunye nawo onke amanyathelo ekufuneka uwalandele | Ezezimali
Usitywina njani isitrayikhi kunye nawo onke amanyathelo ekufuneka elandelwe
Ngokwenyani Imfuneko yokufikelela nokugcina zonke izibonelelo zokungaqeshwa eSpain yi sUkungabikho kwemisebenzi rhoqo kwiinyanga ezintathu, ngexesha, kwaye ugcine itywina ngemihla eboniswe ekhadini.
Nantoni na Kuya kufuneka ube nesicelo sakho ngoku kwinkonzo yengqesho karhulumente yoluntu lwakho oluzimeleyo.
Ukuba awusitywini isitrayikhi, Isohlwayo siyahluka. Ukuba awufumani naziphi na izibonelelo, unokuyekiswa kangangenyanga kwinkonzo yakho yokufuna umsebenzi, uphulukana nobudala bakho. Ukuba ufumana isibonelelo, ukungatywinanga ukungabikho kwemisebenzi kuthetha ukuphulukana nesibonelelo esipheleleyo, kunye nokuphelelwa ngumvuzo.
Ke ngoko, mfundi othandekayo, kufuneka uyazi kakuhle ufuna ntoni kwaye usitywina njani isitrayikhi, ukuze ungabinalo naluphi na uhlobo lwesohlwayo kwaye ungothuki ngohlobo lweeleta eziqinisekisiweyo, uhlobo ekungekho mntu ufuna ukufumana, ngakumbi ukuba awuphangeli.
1 Kuthetha ntoni ukutywina uqhankqalazo?
2 Nini ukutywina ukungaphangeli
3 Ndingalutywina njani olu gwayimbo
4 Tywina uqhankqalazo kwiofisi yengqesho
5 Ukutywina ukunqunyanyiswa ngomnxeba
5.1 Ukutywina isitayile seintanethi
5.2 Yintoni efunekayo ukutywina intswela-ngqesho kwi-intanethi?
5.3 Iimfuneko zobugcisa
5.4 Ungayitywina njani intswela-ngqesho kwi-intanethi
6 Kufuneka wenze ntoni xa ungakwazanga ukutywina ugwayimbo?
7 Kwenzeka ntoni ukuba andiyokutywina ugwayimbo
Kuthetha ntoni ukutywina uqhankqalazo?
Ewe, sele sisazi ukuba wonke umntu, akaphangeli, kufuneka sisityikitye isitrayikhi, ngakumbi ukuba sifumana inkxaso-mali.
Ukuqokelela, umzekelo, into eyaziwa ngokuba kukungabikho kwemisebenzi, kufuneka singasebenzi, kwaye ngenxa yoku, kufuneka sihlale sikhangela imisebenzi.
Olu phando lunokwenziwa nangaluphi na uhlobo, kodwa siyacelwa ukuba sikwenze nakwinkonzo yengqesho yoluntu lwethu oluzimeleyo.
Kufuneka, ke ngoko, qinisekisa, rhoqo kwiinyanga ezintathu, ukuba imeko yentswela-ngqesho iyaqhubeka kwaye ufuna ukuvuselela uphando lwakho lomsebenzi kwilizwe.
Ukutywina intswela-ngqesho, ke, kukuqinisekisa imeko yentswela-ngqesho, kunye nokufuna okusebenzayo.
Kuyimfuneko kuyo nayiphi na inkxaso-mali okanye isibonelelo sokungasebenzi.
Nini ukutywina ukungaphangeli
Kwinqaku elingaphambili sakhankanya ukuba ukuhlaziywa kokukhangelwa kwemisebenzi kwenziwa rhoqo ngekota.
Uya kunikwa - ikhadi enemihla ekufuneka uyigximfize, kwaye igubungela wonke unyaka wekhalenda.
Kufuneka usigximfize isitrayikhi kanye ngalo kanye usuku oluvela ekhadini, nokuba ngaphambili nangasemva.
Ungasitampu kuphela ngeentsuku ngaphandle komhla obonisiweyo, ukuba usuku lungqamana nomhla weholide; Kwimeko apho, unokulihlaziya ibango lakho ngosuku olulandelayo lweshishini.
Ndingalutywina njani olu gwayimbo
Ngethamsanqa, sinokukhetha ukuvuselela ibango lengqesho, kwaye asixhomekekanga kwinto enye kuphela.
Unako yiya buqu kwiofisi yengqesho, Ngokuya kuLuntu oluZimeleyo.
Olunye ukhetho, olona lubalaseleyo kuninzi, yile itywinwe yi-intanethi.
Tywina uqhankqalazo kwiofisi yengqesho
Inketho ebisoloko isetyenziswa, kwaye eyona isiko, kukuya kwiofisi yengqesho kwidolophu yakho okanye esixekweni.
Kufuneka nje yiza nekhadi lakho lokuhlaziya umsebenzi, Baza kukutywina ngokuyivelisa kwiarhente yengqesho ehambelana nayo.
Nangona kumgaqo kungekho mfuneko yokuya kwi-aphoyintimenti, kuya kufuneka uyiqwalasele, kuba uLuntu ngalunye oluzimeleyo lunenkonzo yalo ezimeleyo, kwaye kwizixeko ezikhulu kungafuneka uhambe ngokuqeshwa.
Kuya kufuneka ujonge ishedyuli, kwiindawo ezininzi ezizimeleyo zokuhlaziya ukungabikho kwemisebenzi kwenziwa nge-9 ukuya kwi-10.30: XNUMX kuphela.
Ukongeza kwikhadi lakho lesicelo somsebenzi, kuya kufuneka uphathe i-ID yakho esebenzayo, i-NIE okanye ipasipoti, okanye ugunyaziso lwendawo yokuhlala yokuvuselela imvume.
Uncedo kukuba ufumana irisithi ebonakalayo yohlaziyo lwakho, nokuba kungamaphepha aprintiweyo owenze isicelo sokuhlaziya, okanye isitampu kwikhadi lakho lesicelo somsebenzi.
Ukutywina ukunqunyanyiswa ngomnxeba
Khange siyikhankanye, kuba ngaphandle.
En Iziqithi zeCanary kunye neBalearic Islands ukuvuselelwa kwesicelo somsebenzi kuyafumaneka ngomnxeba. Kulula njengokutsalela umnxeba ku-012.
Khumbula ukuba yenzelwe iiCanary Islands kunye neBalearic Islands, yiyo loo nto singakhange siyikhankanye njengeyona ndlela ifanelekileyo yokuvuselela umsebenzi kuyo nayiphi na indawo ezimeleyo ngaphandle kwezi zimbini.
Tsalela umnxeba ku-012, kwaye uqinisekise ulwazi oluceliweyo kwaye uyakufumana iSMS eqinisekisa ukuvuselelwa kwesicelo sakho somsebenzi. Isicelo sinokukhutshelwa kwi-intanethi.
Ukuze ukwazi ukwenza oku, kuya kufuneka uhlale kwii-Balearic Islands okanye kwiiCanary Islands kwaye ubize inombolo ye-SOIB kwinani elingafihlwanga.
Ukutywina isitayile seintanethi
Eyona ndlela intofontofo, ekhawulezayo nenganconyiyo Kukutywina isitrayikhi kwi-intanethi. Isibonelelo esikubonisayo ngokungathandabuzekiyo sikongela uhambo oluya kwiofisi yengqesho, imigca, kunye nexesha onokulahleka phakathi kwalo lonke uhambo kunye nenkqubo.
Enye inzuzo kukuba unako Hlaziya isicelo sakho somsebenzi ukusuka ngo-00: 00 ngemini ekufuneka utywine ngayo ugwayimbo, kwaye uphele ngo-23: 59. Ukongeza, unokufaka isitampu kwikhadi lakho lokungaphangeli naphi na eSpain, kwaye ivelise ifayile onokuyiprinta, eya kuba bubungqina obusemthethweni bokuvuselelwa kwengqesho.
Sicebisa ukuba wenze ukuhlaziywa kwakho ezinzulwini zobusuku, ke ukuba kukho ingxaki, ungaya e-ofisini uyokuyihlaziya ngentsasa elandelayo.
Yintoni efunekayo ukutywina intswela-ngqesho kwi-intanethi?
Kuya kufuneka uhlangabezane neemfuno ezithile ukuze ukwazi ukutywina isitrayikhi se-intanethi, sukuyenza nje, kuba emva koko uya kuba nengxaki enkulu.
Ukuze ukwazi ukuyenza kwi-Intanethi, okokuqala, kufuneka ube sele ungumntu ofuna umsebenzi, kuba ukuba ufuna ukubhalisa kwi inkonzo yokukhangela umsebenziKuya kufuneka uye kwiofisi yakho, unokuhlaziya kuphela kwi-Intanethi.
Okwesibini, Kufuneka ube negama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha kwiarhente yakho yokukhangela umsebenzi.
Ezi ziqhagamshelo kulowo nalowo kubo:
Khangela nganye nganye indlela yokubhalisa. Ukuba awuyifumani, okanye akunakwenzeka, kuya kufuneka uye kwiofisi ehambelana nayo kwaye ucele igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha. Olu bhaliso luyimfuneko, ngapha koko, siyanyanzelisa, ngekhe ubenakho ukuphinda uvuselele isicelo sakho somsebenzi kwaye uya kukhutshwa ukuba awuyi ngexesha.
Nje ukuba ungene, unako nxibelelanisa igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha kunye ne-ID yakho ye-elektroniki okanye isatifikethi sedigital, ukuze ungene ngaphandle kwephasiwedi kwaye ngokuzenzekelayo.
Ukutywina isitopu, kufuneka ufezekise iimfuno ezithile zobuchwephesha ukuze ukwazi ukutywina isitopu. Sincoma ukuba wenze isitampu sakho kwi-Intanethi Explorer, kwaye ube nenkqubo yokujonga nokuprinta iifayile zePDF, umzekelo, iAcrobat Reader.
Kuya kufuneka uyazi ukuba Isikhangeli se-Opera asamkelwanga. Izikhangeli eziphambili zamkelwe, kodwa unokuba nengxaki, ke ncama kwaye uyenze kwi-Internet Explorer.
Ungayitywina njani intswela-ngqesho kwi-intanethi
Ukutywina ukungabikho kwemisebenzi kwi-Intanethi kulula kakhulu, inkqubo yenziwa kwimizuzu engaphantsi kwesihlanu, kodwa besifuna ukukuxelela ngaphambili, into oyifunayo ukuze ungabinangxaki.
Inkqubo yile ilandelayo:
Ngena kwiKomkhulu leKhompyutha leNkonzo yeNgqesho yoLuntu lwakho, kwikhonkco esele sinike amanqaku ambalwa ukubuyela umva.
Khangela icandelo lokuvuselela isicelo
Qinisekisa ukuhlaziywa kwakho
Khuphela irisithi eveliswayo xa uqinisekisa uhlaziyo lwakho: yinto esemthethweni kwaye kuphela irisithi yokubonisa ukuba usivusile isicelo sakho ngexesha elililo nangokuchanekileyo.
Sinyanzelisa ukuba wenze i Ukuhlaziywa kwesicelo sakho somsebenzi Ngethuba lokuqala losuku, xa kunokubakho ingxaki, yiba nexesha elifanelekileyo lokuya e-ofisini uyokutywina ugwayimbo ngendlela echanekileyo, yokugcina ixesha kunye nexesha. Sukushiya ukuvuselelwa kwesicelo somsebenzi kwangolo suku lunye emva kwemini, kuba ukuba kukho ingxaki kwaye awukwazi ukutywina ... uya kuba nengxaki enkulu.
Kufuneka wenze ntoni xa ungakwazanga ukutywina ugwayimbo?
Kuya kufuneka uhlaziye isicelo sakho somsebenzi ngomhla owunikiweyo ... kodwa iingxaki zingavela. Ukuba awukwazi ukubakho ngenxa yokugula okanye imeko yongxamiseko, Yazisa iofisi yakho yengqesho ngokukhawuleza, ukuze uthethe ukungabikho kwakho. Unokufumana ukumiswa kwetyala ukuvuselela ibango lakho xa ukwimeko yokukhutshwa.
Ukuba ulibele, yiya ngosuku olulandelayo, nge Iiofisi ezininzi ungatywina isibini kwaneentsuku ezimbini emva komhla omiselweyo. Ukuba uqaphele oku, kwaye sele kudlule iintsuku ezimbini, ngokuqinisekileyo isohlwayo esihambelanayo sele siqhubeka.
Kwenzeka ntoni ukuba andiyokutywina ugwayimbo
Isohlwayo ngokungatywinwa kwesitrayikhi Ukufika kwangexesha baxhomekeke ngokupheleleyo kubunzulu bokubuyela kwimeko yesiqhelo. Ezi zezohlwayo zihlala zibabolekisi abangasityikityi isitrayikhi, okanye basityikitye kade.
Ngethuba lokuqala, uya kunqunyanyiswa inyanga kwisicelo sakho somsebenzi, kunye nokuqokelelwa kwesibonelelo sakho okanye inkxaso-mali
Kwityeli lesibini, uyakuyekiswa iinyanga ezintathu uqokelela isibonelelo sokungaphangeli
Ixesha lesithathu, isohlwayo iya kuba ziinyanga ezintandathu zelahleko kwisicelo sakho somsebenzi, nasekuqokeleleni isibonelelo okanye inkxaso-mali
Ixesha lesine uyakuyekiswa ngokusisigxina njengomntu ofuna umsebenzi, kwaye isibonelelo okanye inkxaso-mali oyifumanayo nayo iyakunqunyanyiswa ngokusisigxina.
Kufuneka usoloko uyikhathalele imihla Kuya kufuneka utywine ugwayimbo kwaye wazi ukuba yeyiphi eyona ndlela ifanelekileyo kwaye onokufikelela kuyo ukuze uvuselele isicelo sakho somsebenzi. Yiya eofisini yakho unayo nayiphi na imibuzo okanye iingxaki, kwaye uhlale usivuselela isicelo sakho kwangoko, ukuze ube nexesha lokuzisombulula ngaphandle kokulahlekelwa ngumhla wakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Usitywina njani isitrayikhi kunye nawo onke amanyathelo ekufuneka elandelwe
Iifilimu ezintandathu zokuhluba umhlaba wentengiso yemasheya
Igesi yendalo: I-Repsol kunye neLa Caixa bathetha-thethana nge-20% yabo